Global Voices teny Malagasy » Fandinihantena Sy Fikarohana Ny Antom-pisiana Ao Anaty Tontolom-bolongana Oganda · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Aogositra 2018 13:04 GMT 1	 · Mpanoratra Rebekah Heacock Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, Fampandrosoana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Teknolojia
Rebekah Heacock  no anarako. Ity no lahatsoratro voalohany amin'ny nisoloako an'i Joshua Goldstein .
Manana olana ara-pisiana miseho amin'ny endrika isankarazany ireo blaogera Ogandey. Nanomboka tamin'ny volana janoary ny fandinihantena eny anivon'ireo Blogren, raha toa izy ireo nanomboka nifampiantso , rehefa injay marobe ireo blaogera nanohitra  ny famoronana ny Ora Mamalifaly (Happy Hours) ho an'ireo Blaogera ao Oganda  sy ireo Loka ho an'ny Bilaogy Tsara Indrindra ao Ogandà .
Tranga roa vao haingana tao Kampala no niteraka andiana hafatra iray vaovao ahitàna ny tanjon'ny fanoratana blaogy ao Ogandà. Ny voalohany tamin'izany dia ny fitsidihan'ireo Danois efatra mpanao sarimihetsika fanadihadiana  izay tonga mba hanadihady ny tontolombolongana Ogandey. Nanontany tena  izy ireo hoe sehatra toy inona eo amin'ny mponina no tsinjon'izy ireo avy eny amin'ny mason'ny blaogera Ogandey salantsalany.
Novalian’ ny “27th Comrade” tamina tsikera iray tena mavaivay mikasika ireo fomban'ny media mahazatra ao Afrika :
Ianao ve, blogren, nahamarika fa isaky ny alefa amin'ny CNN i Afrika (na manerana ny fantsona fahitalavitra hafa izay mamoky anao ny fampielezan-kevitry ny fahavalo), ny hitanao dia ireo ankizy maimbo miaraka amin'ireo lalitra manemitra ny orony?… Manana tantara maro ho tantaraina aho mikasika ny fitomboana ho lehibe tao amin'ny fehintany… Saingy satria aho voky tsara, miteny Frantsay (maharikoriko) aho, tsy fantatro akory ohatran'ny inona izany ady izany… Mampiasa ny Linux aho, angalariko ny Haskell, tiako ny Ruby, vao 9 taona aho dia efa nandevozin'ny solosaina (ary tsy lavitra ilay Tanibe Voatsodrano velively na dia iray segondra monja aza), ary mandrindra ireo motera SMS aho ao anatina tolakandro mahasorena (eny, arahabaina ireo Amerikana – miezaka mirehareha eto aho) Tsy izaho mihitsy no handeha hatao ho lohahevitry ny Focus.
Tao anaty lahatsoratra fanarahamaso iray, nomarihi ny fa io karazana fifantohan'ny media io dia “fanadiovana ny atidohan'ny Tandrefana fotsiny amin'ny alalan'ny fampisainana fa isika rehetra dia lava**ody iray avokoa. Tsy isika rehetra, indrindra fa ao Afrika ireo blaogera UG, ary ny Reniko ihany koa.”
Namerina naka ny lohahevitry ny fahàn'ireo media ny Country Boyi, nentanin ‘ny resadresaka niarahana tamina mpanao gazety iray izay nanazava ny filàna ny fijerena kokoa ny eo an-toerana ao anatin'ireo vaovao iraisam-pirenena, indrindra fa any anatin'ireo tantara mikasika ny fifandirana ao Oganda avaratra  izay maharitra hatramin'ny ampolotaonany maro. Nirotsaka izy handray anjara amin'io fomba fijery io.
Tsy maintsy mamaky mismisy kokoa mikasika ny lalàna maha-olona iraisam-pirenena aho ary tsy maintsy mahazo ny Satan'i Roma mikasika ny CPI (Fitsarana iraisampirenena misahana ny heloka bevava ). Hiara-mitompo amin'ny fitsaràna aho. Mila maharaka tsara ireo vaovao aho. Tsy maintsy mianatra tsara ny fiasan'ilay rafitra aho, mianatra mafy ary “manaraka ny onjany” ho amin'ny fandrakofana ny tantaran'ny raharaham-pitsaràna horaketiko, hoy i Katy tamiko.
Ny tranga faharoa nandrehitra ny adihevitra dia ireo fifandonana  tao Kampala tamin'ny volana lasa teo mikasika ny famarotana an'ireo tany ao amin'ny Alan'i Mabira ho ampiasain'ny orinasa iray mpanao siramamy. Amin'ny alalan'ny fanantsiniana an'ireo namany blaogera noho ny tsy nanoratan-dry zareo betsaka mikasika an'ireo fihetsiketsehana mahery setra, nanisy tsindrimpeo  i Henry Owera mikasika ny maha-zava-dehibe ny asa fanaovana gazety an'ny olom-pirenena tsotra – na ireo “olom-pirenena” mpila ravinahitra avy any ivelany, na ireo Ogandey – ary mba “hitàna diary momba ny tranga sy ireo toedraharaha” eo amin'ny firenena.
Ny herinandro lasa teo, tany anaty fihaonan'ireo blaogera, niparitaka ny fitadiavana ny antony, tonga hatrany amin'ny “blaogera Ogandey iray tsy fantatra”, izay nanoratra tamin'i Josh tao amin'ny In an African Minute ary nisaotra  an'ireo blaogera Ogandey tamin'ny fampahatsiahivana azy tsy nahy an'ireo karazana fiainana marobe ao amin'ny firenena.
Indraindray aho dia tototra tanteraka ao anatin'ireo tantara ratsy izay famerimberiko tsy mitsahatra ary averiko foana (zazakely ao anaty lavapiringa, ankizikely manao miaramila, fanolanana ary famonoana faobe, katsaka atao sakafo, rantsana tsy hita) ka adinoko ny hoe i Kampala manana vondrom-piarahamonina sambatra izay misotro kafe ary miresaka mikasika ny tontolo midadasika sady mifanome loka ho an'ny blaogera tsirairay. Manan-danja ho ahy ny mahita an'i Ogandà anatinà toe-javatra iray hafa raha oharina amin'ny fahitako ny fahantrana tsy misy fanantenana izay soratako.
* Fanamarihana avy amin'i Joshua Goldstein:
Te-haneho fiisaorana ho an'ireo rehetra izay naneho hevitra tamin'ireo lahatsoratro aho nandritra izay 8 volana farany izay. Te-hiisaotra manokana an'ireo blaogera ogandey aho izay nahafaly ahy fatratra ny fihaonana taminy nandritra ireo Ora Mamalifaly tao Kampala sy any anaty tontolombolongana. Tsy ho lavitra aho akory.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/20/124659/
 Rebekah Heacock: http://jackfruity.blogspot.com/
 nanomboka nifampiantso: http://ugandanblogumentary.blogspot.com/2007/04/species-of-blogren.html
 Ora Mamalifaly (Happy Hours) ho an'ireo Blaogera ao Oganda: http://jackfruity.blogspot.com/2006/12/uganda-bloggers-happy-hour.html
 Loka ho an'ny Bilaogy Tsara Indrindra ao Ogandà: https://www.globalvoicesonline.org/2007/02/26/uganda-special-report-on-best-of-blogs/21285
 Danois efatra mpanao sarimihetsika fanadihadiana: http://ugandanblogumentary.blogspot.com/
 Nanontany tena: http://ugandanblogumentary.blogspot.com/2007/04/what-is-it-about.html
 fifandirana ao Oganda avaratra: http://en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Resistance_Army
 ireo fifandonana: http://allafrica.com/stories/200704121021.html
 nanisy tsindrimpeo: http://owerahbits.blogspot.com/